Mogadishu Journal » Khasaaraha weeraradii caawa ka dhacay Muqdisho
Mjournal :-Saraakiisha ciidamada Madaxtooyadda Villa Soomaaliya, ayaa sheegay inay toogteen Saddex nin oo ahaa rag hubaysan, lana socday gaari ku qarxay halka loo yaqaan Dhagaxtuur oo ku dhaw Masaajidka Isbaheysiga ee Magaalada Muqdisho.
Saraakiisha Madaxtooyadda waxa ay sheegeen ciidamada ku sugan Koontaroolka Madaxtooyadda inay dileen Saddexdaan nin oo ee hubaysan, kuwaasi oo doonayay inay dagaal ku galaan Madaxtooyadda.
Gaarigii ay wateen raggaan hubaysan ayaa ku qarxay meel ku dhaw Xerada Dhagaxtuur oo ciidan ay degan yihiin, kadib markii ciidamada Koontaroolka Sayidka ay soo rasaaseeyeen gaariga oo taayarada ay ka banjariyeen.
Dhaqdhaaqa guud ee nawaaxiga Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa xaniba oo ma jirto gaadiid iyo dad halkaasi socda, marka laga reebo ciidamo hubaysan oo kaliya.
Gaari kale ee ku qarxay Parking Hotel Dorpin ee Isgoyska Jubba lama oga khasaaraha ka dhashay, laakiin dadkii meesha ka agdhawaa ayaa sheegaya inuu jiro khasaare.
Dowladda Soomaaliya wali kama aysan hadlin qaraxyadan iyo rasaasta tooska ah ee caawa ka dhacday Magaalada Muqdisho.
Shalay ayeey aheyd markii Dowladda Soomaaliya ay ka digtay qaraxyo gaadiid ah oo ku jira Magaalada Muqdisho.